🥇 ▷ Xagee laga heli karaa sunta ku haysa dabinka Fortnite ✅
Xagee laga heli karaa sunta ku haysa dabinka Fortnite
Xagee laga heli karaa sunta ku haysa dabinka Fortnite. Dabaqyada sunta leh waa shay aad u yar. Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in kaliya lagu heli karo hadda sida bililiqeedka dhulka ah, ama booska uu ka haysto ciyaartoy la baabi’iyey. Sidaasoo kale, haddii aad runtii aad ugu baahan tahay inaad hesho mid ka mid ah Suntooyinka Dabaqyada Suntu ee Fortnite, waxaan kugula talineynaa inaad aado meel leh magac.
Waxaa sidoo kale mudan in la xuso taas, marka loo fiiriyo qibradeena tan iyo cusbooneysiinta v8.20 ee hadda socota, waxay umuuqataa inaysan jirin fursad badan oo lagu helo mid ka mid ah dabinadan haddii aad kujirto biome kuleylka qaybta waqooyi-bari ee khariidada. Haddii ay dhacdo inaad u maleysay in mawduuca la wadaago ee aaggan iyo shayga uu saameyn ku yeelan karo halka laga heli karo.
Waxa dabinnada sunta ah ee sunta ah (waxyeelo, radius, iwm)
Maaddaama ay fududahay in la qiyaaso magac, Sumow Dart Traps… Daawooyin sun ah… oo sumaysan. Khatarta oo dhan, waxay dabinnadaas ku ridayaan qolofka dabeysha leh qof walba oo ka taga saddex sedex unug oo korantada toosan ah ama afar unug oo ah gunta toosan. Si kale haddii loo dhigo, waxay yihiin saddex qaybood oo qaab dhismeedka ah oo ku wajahan gidaar, ama afar dhisme oo derbi ka ah dabin saqafka ah.
Mar haddii la garaaco, cadowgu wuxuu bilaabi doonaa inuu helo 10 waxyeelo halkii tic, oo leh sideed fiisig muddo ah toddobo sekan. Taas macnaheedu waa in dabinka sunta leh ee waxyeellada leh ay si wax ku ool ah wax uga qaban karaan 80 waxyeelo gabi ahaanba, iyo wixii ku soo kordha oo ka yimaada dabinka sunta ah ayaa dib u bilaabi doona jadwalka shaqeynaya. Si kastaba ha noqotee, kani ma kordhin doono qaddarka burburka halkii sek.
Tusmooyinka loo adeegsado dabinnada sunta ee Fortnite
Iyada oo ay ugu wacan tahay awooda ay kaga dhaadhicin karto dhaawaca ka soo baxda, ma aha in ay sidaas ugu sii muuqato meesha ay ku taal dabinnada ‘Polar Dart’ marka loo barbar dhigo heerka ugu sarreeya ee ugu sarreeya. Taas macnaheedu waa inaad ku sii dhejin karto geeska si aad uga soocdid kuwa kaa soo hor jeeda. Ama, dul dhig saqafka hoostiisa iyo dabin sun ah derbiga agagaarka geeska ah si aad 230 ilbiriqsiyo ah ugu sameyso 7 ilbiriqsi gudahood.
Qaab kale oo lagula wareegi karo ciyaartoy kale oo ilaaliya Poison Dart Traps waa in loo isticmaalo inta lagu guda jiro dagaalka dhismaha, ama si fudud qaab dhismeedka labada qof ee kale ay ku dagaalamayaan. Dhig miiska sagxaddiisa haddii qof isku dayo inuu ku boodo afarta unug ee waaweyn, waxay qaadan doontaa waxyeeladaas sunta ah ee macaan.
Si kale haddii loo dhigo, hal abuurka iyo xariifnimada aad u maleynayso markay tahay isticmaalka Dabaqyada ‘Poison Dart Traps’, ayaa ah fursadda weyn ee dhibaatooyinka u keenta dadka. Kuwani waa wax cusub oo ciyaartoy badan xitaa ma tixgelin doonaan tixgelintooda marka ay maamusho maabka.
(Wadarta: 0 Celcelis: 0/5)